महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? जानी राखौँ - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? वा कुन कुन सुरक्षित दिन हो ? भन्ने विषय एकीन गर्न गाह्रो छ । किन की महिलाको महिनावारी चक्र कति दिनको छ, यसले निर्धारण गर्छ ।
नियमित महिनावारी हुने र नहुनेमा यसले फरक अर्थ राख्छ ।सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रुपमा यौ;न स;म्पर्क, वी;र्य स्ख;लन, डिम्ब निषेचन र डि;म्बरोपण जस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ ।
महिलाको डि;म्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ । डि;म्ब नि;ष्कासन हुने समय नजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ । शु;क्रकीटसँग मिलन हुन डि;म्ब निस्किएको हुनु आवश्यक छ ।
डि;म्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ । यस्तै २८ दिनको महिनावारी भएको महिलाको १४औं दिनतिर डि;म्ब निस्कने भएकाले त्यतिबेला यौ;न स;म्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ ।
डिम्ब निस्किएको यस्तै २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँच्छ भने महिलाको प्रजनन अङ्गभित्र शुक्रकीटहरू ७२ घण्टा वा त्योभन्दा बढी बाँच्न सक्छ, त्यसैले डि;म्ब निस्कने केही अघिको र केही दिनपछिको समयलाई गर्भधारणका दृष्टिकोणले असुरक्षित काल मानिन्छ ।
के तपाई मोटोपनबाट दिक्क हुनुहुन्छ ? त्यसो भए अपनाउनुहोस् यी १४ तरिका
मोटोपन कसरी घटाउने, तौल कसरी कम गर्ने रु अहिले धेरैको निम्ती टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ यो । यसैको समाधानका लागि कोही जिम धाइरहेका छन्, कोही योगको शरणमा पुगेका छन् । कसैले चिकित्सकिय विधी अपनाएका छन्, कसैले खानामा कटौती गरेका छन् ।
तौल बढ्नु वा मोटोपन आफैमा समस्या हो । यसले अरु समस्यालाई समेत निम्त्याउँछ । शरीर भद्दा र असुहाउँदिलो देख्ने मात्र होइन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगको खतरा पनि बढाउँछ । त्यसैले अहिलेका पुस्ताका निम्ति मोटोपन वा तौल नियन्त्रण ठूलो चुनौती बनेको छ ।
किन बढ्छ तौल र मोटोपन ?
विभिन्न अध्ययनमा के देखिएको छ भने, मोटोपन बढ्नुमा बाह्य कारण मात्र जिम्मेवार छैन । कतिपय अवस्थामा यो बंशानुगत रुपमा आउने गर्छ । जस्तो, बावुबाजे मोटा छन् भने त्यसको प्रभाव उनीहरुको सन्तानमा पनि देखिन्छ । यद्यपी यो सबैमा हुदैन ।
खासमा अहिलेको खानपान र जीवनशैली नै मोटोपनको कारण हो । चिल्लो, चाप्लो, मसलेदार खानेकुरा, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक आदिको जथाभावी सेवनले मोटोपन बढाएको बताइन्छ । त्यस्तै निस्त्रिmय जीवनशैली, अस्वस्थ्यकर दिनचर्या यसको जिम्मेवार मानिएको छ ।
कसरी नियन्त्रण गर्ने मोटोपन वा तौल ?
मोटोपन घटाउन जीवनशैली र खानपानमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सन्तुलित खानपान र जीवनशैली एक प्राकृतिक विकल्प हो, जसले मोटोपन एवं तौल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अतः यहाँ इजी वेट लस टिप्स दिइएको छ ।
मोटोपन वा तौल नियन्त्रणका लागि खानपान कटौती गर्छन् । फास्टिङ गर्छन् । यद्यपी यसले शरीरमा आवश्यक पोषणको कमी हुन्छ । त्यसैले तौल घटाउनका लागि खानपानमा कटौती गर्ने होइन । बरु, स्वस्थ्य र सन्तुलित खानेकुरामा जोड दिनुपर्छ । पानीको सेवन बढाउनुपर्छ । पानी र फलफूल सेवन गरेपछि अतिरिक्त खानेकुरा नियन्त्रण हुन्छ । यसले स्वतः तौल नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।
निस्किय दिनचर्या मोटोपन एवं तौल बढ्ने कारण हुन् । एकै स्थानमा लामो समय बस्ने । सुत्ने, उठ्ने अनियमित तालिका । राती अबेरसम्म बस्ने बानी । यी सबै आनीबानीले हो, मोटोपन बढाउने ।
त्यसैले तौल एवं मोटोपन नियन्त्रणका लागि सक्रिय दिनचर्या आवश्या हुन्छ । साथै व्यायाम गर्ने, पैदल हिँड्ने लगायत शारीरिक गतिविधिलाई बढाउनुपर्छ ।
त्यो रात उनको प्रेमको नशा लागेर म कसरी ढले भन्ने कुरा आज आएर सम्झिदा...
मन परेको मान्छेलाई कहाँ सजाउने ?
शितल दाहाल केही दिनअघि मेरो भाइले उसकी प्रेमिकाको फोटो आफू सुत्ने कोठामा निर्धक्क सजाएर...
काठमाडौं, १९ चैत । इपिएस प्रक्रियामार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया आएका सुर्खेत, चौकुने–४ बिजौराका...
मलेसियाबाट स्वदेश फर्किने तयारीमा रहेका एक नेपालीको सडक दुर्घटनामा मृ’त्यु
अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा एक नेपाली युवा विद्यार्थी मृ’त भेटिए !
मलेसियामा संक्रमण तिब्र : आज पनि ३ हजार ५८५ संक्रमित थपिए
आजदेखि भारतको महाराष्ट्रमा १५ दिनका लागि कर्फ्यू
काठमाडौं, १ बैशाख । भारतको महाराष्ट्रमा आज (बुधवार)देखि कर्फ्यू जारी गरिएको छ । कोरोना...
भारतको दिल्लीमा कडा लकडाउन
अभिनेत्री कट्रिना कैफलाई काेराेना पाेजेटिभ
भारतमा कोरोनाबाट एकैदिन ५ सयको मृत्यु, ९३ हजार भन्दा बढिमा संक्रमण